Kuenzanisa kwenhare: Doogee V10 vs Doogee V20 | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 20/12/2021 08:51 | Nhare mbozha, Nhare
Doogee anoenderera mberi achibheja pamusika wemafoni akangwara uye akaomarara, ndiko kuti, ane akatevedzana maitiro anoita kuti ave akasiyana uye kunyanya kupikisa. Aya ndiwo maitiro avakaita kuzoparura V20, chishandiso chakamisikidzwa semagumo emakore akati wandei echiitiko uye kuzvipira. Iyo Doogee V20 nyowani ndiye anotsiva akananga kuDoogee V10, modhi yakakohwa mibairo mikuru. Midziyo miviri ine zvimwe zvakafanana, asi zviri pachena kuti ine misiyano mikuru nekuda kwehukuru hutsva hwemakore achangopfuura, tinozvienzanisa.
Tora mukana we Doogee V20 Dual 5G inopa nokunyoresa pakati pevatengi 1.000 vokutanga.
1 Kufanana kwemidziyo miviri
2 Kusiyana pakati pemidziyo miviri
Kufanana kwemidziyo miviri
Imwe yezvakanyanya kufanana pakati pezvishandiso zviviri izvi ndezvekuti zvese zvinotanga kubva pafungidziro yekuti kana zvikasatyoka, hazvifanirwe kugadziriswa. Ose mamodheru anoisa sere-musimboti processor kuti vavandudze mashandiro avo uye nekupa maficha kune kurongeka kwezuva. Nenzira imwe cheteyo, Ivo vane chigunwe chekunzwa chigunwe chiri padivi bezel yechishandiso, 16MP selfie kamera uye nekukurumidza kuchaja inosvika 33W inoperekedzwa neNFC. uye tsigiro yeakawanda mafrequency anoita kuti ienderane munzvimbo chero ipi zvayo.
Zvingave sei neimwe nzira, zvese zvishandiso zvine zvitupa zvepamusoro-soro maererano nekupikisa mamiriro ekunze asina kunaka emarudzi ese senge. IP68, IP69K uye zvechokwadi chiyero chemauto MIL-STD-810 ine chitupa chayo.
Zvisinei, iye zvino ndiyo nguva yekuisa pfungwa pamisiyano iri pachena.
Kusiyana pakati pemidziyo miviri
Sekusiyanisa hunhu, yekare Doogee V10 yaive ine infrared thermometer kumusana kuti ikwanise kuyera tembiricha nekukurumidza, zvisinei, ne. Iyo Doogee V20 yanga ichida kuenda nhanho kumberi uye yakawedzera chidzitiro kuseri icho chinozotipa rumwe ruzivo senge zviziviso, nguva uye nezvimwe zvakawanda. Chimwe chinhu icho kusvika ikozvino takangoona mune mamwe epamusoro-magumo terminals.
Zvirinani AMOLED skrini uye yakakwirira resolution
Rear screen kuti utipe ruzivo
Iyo yekumberi kana huru skrini yatorawo yakakosha kusvetuka, uye isu tave neinopenya skrini AMOLED ine 6,43-inch FHD + resolution, iyo inouya kuzotsiva yekare 6,39-inch HD + resolution LCD yakaiswa paDoogee V10. Izvi pasina mubvunzo zvave kumwe kwekusvetuka kwakakosha maererano nekuchinjika kune yazvino chizvarwa tekinoroji, nenzira imwecheteyo AMOLED pani yeDoogee V20 inogadzirwa neSamsung ichapa 20: 9 chikamu chiyero. zvichienzaniswa ne19: 9 yeDoogee V10, ine musiyano mukuru uye HDR kugona, zvakare inovandudza kupenya kwainokwanisa kupa.
Muchiitiko ichi saizi mumAh yebhatiri yakaderedzwa zvakanyanya, Nepo iyo Doogee V10 yakapihwa 8.500 mAh, iyo Doogee V20 nyowani ichagara pa6.000 mAh. Nepo ese ari maviri achichengetedza iyo 33W nekukurumidza kuchaja, iyo Doogee V20 nyowani ichapa isina waya yekuchaja neQi chiyero chekusvika ku15W, iyo inodarika iyo 10W yekuchaja isina waya iyo Doogee V10 inochengeta kusvika zvino. Izvi zvinoita kuti iyo Doogee V20 iwedzere compact uye kureruka, zvisinei, Doogee anovimbisa kuti nguva yekushandiswa kwemudziyo inochengetedzwa ine yakaderera bhatiri nekuda kwe optimizations muOperating System uye padanho rehardware, zvese Izvi zviri pachena kubatsirwa kubva kune AMOLED pani iyo ikozvino inoshandisa uye inovandudza mashandisirwo echidzitiro pa.
Iyo kamera ndeimwe yemapoinzi akatambura zvakanyanya nekugadzirisa, ngatitarisei ese makamera:
64MP main kamera
20MP yekuona husiku kamera
Kubva panguva ino kamera yakagadzirika zvinoshamisa sezvataona, ichiripo (sezvatakambotaura) kuita kwakanaka kwe16MP selfie kamera pamberi.
Payeuko uye nhanho yekuchengetedza, iyo Doogee V20 inokura kubva pa128GB yeV10 kusvika ku256GB yemhando yazvino, uchishandisa UFS 2.2 tekinoroji yekuvandudza kufambisa kwedhata. Ehe, iyo 8GB ye RAM ndangariro yezviviri zvese inochengetwa.
Zviri pachena kuti Doogee V20 ndiyo shanduko iri pachena ine chinangwa chekusimudzira nhaka yeDoogee V10, kuenderera mberi kweDoogee V Series iyo ichapihwa zvakare zvakaderedzwa zvikuru uye zvinopihwa pane iyo yepamutemo Doogee portal. Zuva rekuburitswa richaziviswa munguva pfupi uye vanoda mafoni ane rugged vanogamuchirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Kuenzanisa kwenhare: Doogee V10 vs Doogee V20